သတင်း | November 2019
ဘယ်လိုက Windows7မှာတစ်အိမ်မှာကို DLNA server ကိုဖွင့်လှစ်ရန်နှင့် 8.1
အယ်ဒီတာရဲ့ရွေးချယ်မှု November 22,2019
ဂိမ်းကစားသူ Bethesda မတိုင်မီထပ်မံကျ 76 ၎င်း၏ဗားရှင်းဖြန့်ချိလိုက်ပါတယ်
ထပ်မံကျ 76 ၏လွှတ်ပေးရန်နေဆဲနီးပါးငါးလမီ, ဒါပေမယ့်ယခုလူတိုင်းလုပ်နိုင်ပါကတစ်ဦး multiplayer ဂိမ်း mode ကိုဆောင်ခဲ့ဦးမည်ဖြစ်သောအဆိုပါအခက်အခဲများနှင့်ခြို့ငဲ့အဘို့ပြင်ဆင်လော့။ အဆိုပါအမည်ပြောင် SKK50 အောက်မှာအသုံးပြုသူကတီထွင်ထပ်မံကျ4ပြုပြင်မွမ်းမံ, အဟောင်းကိုအင်ဂျင်ကိုအပေါ်သစ်ကို Bethesda စီမံကိန်းကို၏သော့ features တွေထပ်ဖွရည်ရွယ်သည်။
အဘယ်အရာကို VKontakte ၏တိုက်ရိုက်အဖုံးသည်, ဘယ်လိုထည့်သွင်းဖို့
လူမှုကွန်ယက် "VKontakte" လစဉ်လတိုင်းအဘယ်သူမျှမပြိုင်ဖက်ရှိသည်သောယင်း၏အသုံးပြုသူများသည်တီထွင်မှုနှင့်ချစ်ပ်, အံ့သြသွားတယ်။ ဒါဟာတစ်ဦးခြွင်းချက်နှင့်လက်ရှိဒီဇင်ဘာလမဟုတ်ခဲ့ပေ။ အုပျစုမြား "VKontakte" အတွက်တိုက်ရိုက်အဖုံး - ကုလားကာနောက်ကွယ် obzavolsya, Runet ၏အဓိကအရင်းအမြစ်များ၏တဦးတည်းထက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ဆုံးသောစိတ်ဝင်စားဖို့။ မာတိကာတိုက်ရိုက်ဖုံးဗားရှင်း VKontakte ၏တိုက်ရိုက်အဖုံးစေရန်မည်သို့၏တိုက်ရိုက်အဖုံးအဘယ်အရာကိုအသုံးပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်: ခြေလှမ်းညွှန်ကြားချက်အားဖြင့်ခြေလှမ်းတိုက်ရိုက်ဖုံးတိုက်ရိုက်ဖုံးကဘာလဲ - ကသင့်ရဲ့အသိုင်းအဝိုင်းများအတွက်ရုံလူကြိုက်များဝေါလ်ပေပါထက်အများကြီးပိုပါတယ်။
အဆိုပါဂိမ်းတစ်ဆယ်ကီလိုမီတာဝေးလ် Interactive မှ၏ developer များ၏ရုံးခန်းကနေသတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ နာမတော်ကိုအမှီ ပြု. 1872 ခုနှစ်တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေရစ်ချတ် Blackmore "Skeram ကနေမိန်းကလေး" အားဖြင့် eponymous ထိတ်လန့်ဝလေသီချင်းနှင့်စာအုပ်, ကိုရည်ညွှန်းသည်။ ဝေလနယ်၏တောင်ဘက်တွင်တည်ရှိအိမ်တော်ကို Skeram (Sker အိမ်), - သို့သော်ဤအမှုအခင်းဖြစ်ပွားရာ၏နာမတော်ကြောင်း မှလွဲ. ချိတ်ဆက်ကစား။
Gigabyte Aorus AD27QD - ကမ္ဘာ့ပထမဦးဆုံးနည်းဗျူဟာမော်နီတာ
Gigabyte ကုမ္ပဏီ 27 လက်မအရွယ်မော်နီတာနည်းဗျူဟာ Aorus AD27QD လွှတ်ပေးရန်ပြင်ဆင်နေသည်။ အဆိုပါနည်းပညာ, ထုတ်လုပ်သူအွန်လိုင်းဂိမ်းထဲမှာပြိုင်ဘက်ကျော်ကစားသမားတစ်ဦးအားသာချက်များကိုနိုင်ပါလိမ့်မည်အာမခံထား။ Gigabyte Aorus AD27QD 144 Hz တစ် resolution ကို 2560h1440 အချက်များနှင့်အမြင့်ဆုံးသည် frame rate ကိုအတူက IPS-panel ကိုအပေါ်အခြေခံပါတယ်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ဖြန့်ဖြူးဝန်ဆောင်မှုရေနွေးငွေ့ဂိမ်းများကို 2018 ၏ပထမဦးဆုံးဝက်ကာလအတွင်းဂိမ်းစီမံကိန်းများကို၏လူကြိုက်များတဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်ထုတ်ဝေခဲ့သည်။ ရုရှားနိုင်ငံမှာတော့အရောင်းရဆုံးခေါင်းစဉ်တွေထဲကအကောင်းဆုံးကိုအသစ်သောပစ္စည်းများ, တစ်ချိန်တည်းအများဆုံးဂိမ်းကစားမှာကစားဖြစ်ကြောင်း VR-စီမံကိန်းများနှင့်ဂိမ်းသီးခြားစာရင်းထုတ်လုပ်အုပ်ချုပ်ရေးရေနွေးငွေ့အဆင့်ခြုံငုံရောင်းအားများအပြင်ဒုံးအဖွဲ့ချုပ်, Counter-Strike ကို Global ထိုးစစ်, PUBG နှင့် GTA 5. ပါဝင်သည်။
ပိုလန်စတူဒီယို Madmind စတူဒီယိုကတီထွင်ရှင်သန်မှုထိတ်လန့်ဒေ၏ငရဲသည်, ကလစ်များ, အသံနဲ့ animations တွေကိုကငျးမဲ့တဲ့ဆင်ဆာဗားရှင်းအတွက်ဖြန့်ချိခဲ့သည်။ သို့ပြန်သွားသည်ကစားသမားမူလကတစ်ဦး patch ကိုအတူစီစဉ်ထားအကြောင်းအရာ developer များအဖြတ်, ပြီးတော့ - ထိုဂိမ်း၏သီးခြားဗားရှင်းပေမယ့်နှစ်ဦးစလုံးမအောင်မြင်ခဲ့အကျိုးတူလှည့်။
Electronic Arts တို့သည်မိုဃ်းတိမ်ဂိမ်းပလက်ဖောင်း၏ဖန်တီးမှုကြေညာလိုက်ပါတယ်
EA ၏၏နည်းပညာစီမံကိန်း Atlas 'ဟုဆိုအပ်၏။ အီလက်ထရောနစ်အနုပညာ၏တရားဝင်ဘလော့ဂ်အတွက်သက်ဆိုင်ရာကြေညာချက် CTO ဖြစ်သူ Ken မော့စ်ကိုပြု၏။ Project မှ Atlas - ရောနှောကစားသမားများနှင့် developer များနှစ်ခုလုံးအတွက်ဒီဇိုင်းရေးဆွဲသောမိုဃ်းတိမ်စနစ်။ ဒီမှာဂိမ်း၏ရှုထောင့်ကနေတိကျတဲ့တီထွင်မှုမည်မဟုတ်ပါ: user က client ကိုလျှောက်လွှာဖြင့် download နှင့် EA ၏ဆာဗာများမှာလုပ်ငန်းများ၌သောဂိမ်းထဲမှာလွှတ်တင်။
ဖန်ဆင်းရှင် Undertale သည်သူ၏ဂိမ်းအသစ်၏လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်ကြော်ငြာတိုဖြန့်ချိ
စစ်တမ်းအတွက်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းယူဂိမ်းကစား ဖိတ်ခေါ်. ။ မကြာသေးခင်ကလွန်ခဲ့တဲ့သုံးနှစ်ကဖြန့်ချိတွစ်တာ-အကောင့် undertale ဂိမ်းထဲမှာ, Indie developer Toby Fox က, ဧည့်သည်တစ်ဦး SURVEY_PROGRAM header ကို (ထို "ဟုအဆိုပါစစ်တမ်း၏ကျမ်းပိုဒ်အဘို့အစီအစဉ်") နှင့်အတူ installer ကို download လုပ်ပါရန်ဖိတ်ခေါ်ထားရာဆိုက် deltarune.com, တစ်ဦးကိုကိုးကားရှိ၏။
Developer များဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ "Star Wars" က၏ Electronic Arts တို့ထံမှသွားပါ
ဖြစ်ရပ်မှန် Star Wars စစ်မြေပြင်က II ကိုဖွင့်ဖို့ပျက်ကွက်စွပ်စွဲထားသည်။ Electronic Arts တို့ကပိုင်ဆိုင်ဆွီဒင်စတူဒီယိုအန်စာတုံး, သို့သော်အချို့အစီရင်ခံစာများအရသိရသည်ဒီနံပါတ်ကိုအမှန်တကယ်ထက်ပင်နိမ့်သည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များတွင်န်ထမ်းများ၏ 10% ကိုဆုံးရှုံး, ဒါမှမဟုတ် 400. ထဲက 40 ခန့်ကလူသိရသည်။ အန်စာတုံးရဲ့ developer များထွက်ခွာဘို့အကြောင်းရင်းနှစ်ခုတောင်းဆိုခဲ့သည်။
ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှု gadgets အပေါ်ချွေတာသုံးစွဲ Apple ကအကြောင်းကို $7သန်းကုန်ကျမည်
သြစတြေးလျတရားရုံး 6.8 သန်းကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာနှင့်ညီမျှ Apple ရဲ့ $9သန်းသြစတြေးလျဒေါ်လာအပေါ်ဒဏ်ငွေချမှတ်။ ကုမ္ပဏီအများအပြားအခမဲ့ပြုပြင်စမတ်ဖုန်းများ၏ပျက်ကွက်မှုအတွက်ပေးချေရန်ရှိသည်လိမ့်မည်, အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် "အမှား 53" သြစတြေးလျဘဏ္ဍာရေးဆန်းစစ်ခြင်းသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်၏ဆွဲထားကြ၏။ ဒါခေါ် "မှားယွင်းနေသည် 53", သင်က iPhone6ရက်နေ့က install လုပ်ပြီးနောက်ဖြစ်ပေါ်သည် iOS ၏နဝမဗားရှင်းနဲ့နောက်ကြောင်းပြန်မလှည်ပိတ်ဆို့ခြင်းကိရိယာစေပါတယ်။
EA ၏မသာတိုက်ရိုက်ဂိမ်းထဲမှာချိန်ညှိဖန်ဆင်းတော်မူသောဖီဖာ 19, များအတွက် patch ကိုဖြန့်ချိ, ဒါပေမယ့်လည်းပြုပြင် meme နားလည်မှုလွဲဖြစ်လာဖို့အချိန်ရှိခဲ့ပါတယ်။ 2006 ခုနှစ်တွင်တစ်ဦးဦးခေါင်းတွင်ပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာပြီးနောက်ကရရှိသွားအကာအကွယ်သံခမောက်လုံးအတွက်လယ်ပြင်ပေါ်ထွက်အမြဲဖြစ်ပါသည်: လန်ဒန် "အာဆင်နယ်" သူ့ရဲ့ထူးချွန်ဘောလုံးကစားသမားဘ, ဒါပေမယ့်လည်းကြည့်ဘို့မသာလူသိများသည်အသက် 36 နှစ်အရွယ်ဂိုးသမား Petr ကရရှိသွားလက်ရှိပါဝင်သည်။
12-Core AMD ၏ Ryzen အခြေခံစံနှုန်းအတွက် lit UserBenchmark
Ryzen processor ကို 3000 စီးရီးထက်ပိုမိုရှစ် cores ရပါလိမ့်မယ်အကြောင်း, AMD ၏ Lisa ကိုစု၏ဦးခေါင်းသည်အခြားလွန်ခဲ့သောနှစ်ပတ်ကပြောပါတယ်, ဒါပေမယ့်သစ်ကိုချစ်ပ်အတွင်းရှိကွန်ပျူတာယူနစ်များ၏အရေအတွက်အတိအကျကိုလူအပေါင်းတို့သည်အချိန်အမည်မသိနျြရစျ။ ဆိုက်အများအပြားအခြေခံစံနှုန်း UserBenchmark ထံမှမကြာမီကဒေတာအခြေအနေကရှင်းလင်း: အ CPU ကို Ryzen အတွက်မိသားစု၏တတိယမျိုးဆက်အနည်းဆုံး 12-Core မော်ဒယ်ပစ္စုပ္ပန်ဖြစ်လိမ့်မည်။
Firaxis ယဉ်ကျေးမှု VI ကိုမှသစ်ကိုဖြည့်စွက်၏အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဝေမျှဖို့ဆက်လက်
လာမည့်တိုးချဲ့အတွက်စုရုံးခြင်းမုန်တိုင်းလူမျိုးသစ်အရပ်ဘက် VI ကိုပေါ်လာပါလိမ့်မယ်။ အင်အားကြီး Suleiman ကဦးဆောင်အော်တိုမန်အင်ပါယာပြင်းထန်တဲ့စစ်ရေးအရေးယူဘို့ညှိ။ နိုင်ငံရဲ့ထူးခြားတဲ့ယူနစ်ဂိမ်း၏နောက်ဆုံးအပိုင်းကတော့ Janissaries ၌ရှိသကဲ့သို့, ဖြစ်လိမ့်မည်။ သူတို့ကအစားဂန္များသည်သေနတ်ကိုင်တပ်သားများ၏အော်တိုမန်ထဲမှာပေါ်လာလိမ့်မယ်။ ဤရွေ့ကားယူနစ်သူ့ရဲ့အချိန်အလားတူယူနစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်တစ်ဦးပိုမိုမြင့်မားခွန်အားနှင့်အောက်ပိုင်းကုန်ကျစရိတ်ရှိသည်။
တွစ်တာ 70 သန်းအကောင့်ပိတ်ပင်ထား
မိုက်ကရိုဘလော့ဂ်များဝန်ဆောင်မှုတွစ်တာအကြီးအကျယ်ဆန့်ကျင် spam များကို, trolls စတင်ခဲ့ခြင်းနှင့်အတုများကိုသတင်းဖန်တီးပါ။ ကိုယ့်နှစ်လတွင်, ကုမ္ပဏီအန္တရာယ်ရှိတဲ့လှုပ်ရှားမှုနဲ့ဆက်စပ် 70 သန်းအသုံးပြုသူအကောင့်ပိတ်ဆို့ထားပြီး, အဆိုပါဝါရှင်တန်ပို့စ်ကရေးသားသည်။ Twitter ကိုတက်ကြွစွာ spam များကိုအောက်တိုဘာလ 2017 ခုနှစ်က c အကောင့် disable လုပ်ဖို့, ဒါပေမယ့်မေလ 2018 အတွက်သော့ခလောက်တွေရဲ့ပြင်းထန်မှုသိသိသာသာမြင့်တက်လာခဲ့သည်စတင်ခဲ့သည်။
90 ရဲ့ထံမှ & Furious သေနတ်သမားကြီးတွေဖန်သားပြင်ပေါ်မှာအတွက်ကြည့်ရှု
ပြီးခဲ့သည့်ရာစု Duke Nukem ၏အများဆုံးမှတ်မိဂန္ shooters တစျဦး၏ရုပ်ရှင်လိုက်လျောညီထွေပြင်ဆင်နေဖွံ့ဖြိုးဆဲခွငျးဖွငျ့ဖွစျသညျ။ အဆိုပါစာရေးဆရာ "Deadpool" ၏စတိုင်အနက်ရောင်ဟာသနှင့်ပြောင်းလဲနေသောအရေးယူဂိမ်းနဲ့ပျော်စရာသည်းထိတ်ရင်ဖိုကတိပေး။ အဆိုပါစီမံကိန်းကိုအစောပိုင်းအစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်းအဆင့်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်ပြီးသားရှုတ်ထွေးအချက်အလက်များနှင့်ကောလာဟလများမှန်ကန်ကြောင်းအတည်ပြုခဲ့ကြသည်။
လျှို့ဝှက်စွာသူတို့ရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏စုဆောင်းခြင်းများအတွက်ဆပ်ဖို့က Facebook အသုံးပြုသူများသည်
2016 ခုနှစ်တွင်လူမှုကွန်ယက် site ကို Facebook မှာစမတ်ဖုန်းပိုင်ရှင်များ၏လုပ်ရပ်များခြေရာခံနှင့်၎င်းတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာသတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်း Facebook က application ကိုသုတေသနတွေစတင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ လျှို့ဝှက်စွာ $ 20 တစ်လအသုံးပြုသူများအချေကုမ္ပဏီမိမိအသုံးပြုမှုအတွက်, စာနယ်ဇင်းသမားများအွန်လိုင်းထုတ်ဝေ TechCrunch တည်စေပြီ။ ကစုံစမ်းစစ်ဆေးနေစဉ်အတွင်းထွက်လှည့်အဖြစ် Facebook ကသုတေသနကာကွယ်ပါ Onavo VPN ကို-client ကိုတစ်ပြုပြင်ထားသောဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ်။
Instagram ကိုဗီဒီယိုက hosting ဒေါင်လိုက်ဗီဒီယိုကိုလွှင့်တင်
Instagram ကိုဗီဒီယိုဝန်ဆောင်မှုပစ်လွှတ်ထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့သည်, သငျသညျတစျနာရီအထိဒေါင်လိုက်လိပ် upload နှင့်ကြည့်ရှုရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ IGTV - ဤဗီဒီယိုများအသုံးပြုသူများသည်နှစ်ဦးစလုံး Instagram ကို၌၎င်း, တစ်ဦးကိုအထူးဖြည့်စွက်အတွက်တတ်နိုင်သမျှ Watch ။ CEO ဖြစ်သူကီဗင် Sistroma Instagram ကိုစမတ်ဖုန်းပေါ်တွင်မီဒီယာအကြောင်းအရာအဆင်ပြေစားသုံးမှုများအတွက်ဒီဇိုင်းသစ်တစ်ခုဝန်ဆောင်မှု၏အဆိုအရကရှိဗီဒီယိုအားလုံးကိုဒေါင်လိုက် oriented ပါလိမ့်မည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်။
အဆိုပါ WhatsApp ကိုလိမ့်မည်စတစ်ကာများ
အဆိုပါလူကြိုက်များ instant messenger WhatsApp ကိုနိုင်အောင်ဝေးစတစ်ကာများများ၏ထောက်ခံမှုကိုဆုံးရှုံးခဲ့ပြီး, သို့သော်မကြာခင်ပြောင်းလဲသွားစေနိုင်သည်။ အွန်လိုင်းစာစောင် WabetaInfo အစီရင်ခံအဖြစ်, ဝန်ဆောင်မှု developer များပြီးသား Android အတွက် App ကို၏ beta ကိုဗားရှင်းအတွက် feature အသစ်စုံစမ်းပြီ။ ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့အစတစ်ကာများစမ်းသပ်မှုစည်းဝေးပွဲကို WhatsApp ကို2မှာထင်ရှား၏။
Bethesda စတူဒီယိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအစီအစဉ်များကိုထပ်မံကျ 76 အကွောငျးပွော
Bethesda တစ်သေနတ်သမား-MMO ထပ်မံကျ 76 ကစားသမားအတွက်အကြောင်းအရာများ၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အစီအစဉ်တစ်ခုတင်ဆက်ကုမ္ပဏီ၏ developer များယခုနှစ်တယောအချိန်ရပါလိမ့်မယ်အသီးအသီးသောအသုံးမျိုးကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဖြစ်ရပ်များ, ရပါလိမ့်မယ်။ နွေဦးအတွက် update ကို "တောရိုင်း Appalachia" ဖြန့်ချိလိမ့်မည်။ ဂိမ်းကစားဂိမ်းထဲမှာထမင်းချက် ပူဇော်. , ဘီယာတားမြစ်ထား "ဘီယာအရက်ချက်-core" ပါလိမ့်မယ်ပထမဦးဆုံးဖြစ်ရပ်မတ်လ 12 ရက်နေ့ကခံစားခဲ့ရလိမ့်မည်။
ဒဏ္ဍာရီယနေ့ yutubery ဝင်ငွေကိုဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရန်။ တချို့ကစာရေးဆရာများနာမည်ကျော် YouTube ကိုဝန်ဆောင်မှုအပေါ်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ရုပ်သံလိုင်းတကယ်ထင်ရသောမဖြစ်နိုင်စေရန်စီမံခန့်ခွဲကြပါပြီ - တစ်ထုတ်လုပ်မှုအရည်အသွေးသည်ဗီဒီယိုအကြောင်းအရာဖန်တီးဖို့ခြစ်ရာကနေ, အမှန်တကယ်ဝင်ငွေအရင်းအမြစ်မှာပျော်စရာနှင့်အလိုလိုက်မယ်လှည့်ကို၎င်း, တစ်ချိန်တည်းမှာမှ - ကမ္ဘာ့တစ်လျှောက်လုံးလူသိများဖြစ်လာရန်။
Antivirus ကို ESET Smart လုံခြုံရေးဖယ်ရှားခြင်း
အခမဲ့ဓာတ်ပုံအယ်ဒီတာနှင့် Collage ဖန်တီး program တစ်ခု Fotor
Advertising ကြော်ငြာ - ထိုမော်တာကုန်သွယ်ရေး, ဒါပေမယ့်မကြာခဏကြော်ငြာရှင်များဒါကြောင့် overdoing, ထိုခရီးစဉ်ကိုနီးပါးဆိုကို web အရင်းအမြစ်များကိုခက်ခဲဖြစ်လာသည်။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောကြော်ငြာ blocker အဖြစ် tool ကိုသုံးပြီး, သင်က၎င်း၏အမျိုးမျိုးသောသရုပ်အတွက်ကြော်ငြာဘာအကြောင်းကိုမေ့လျော့နိုင်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ Adblock Plus အား - ထိုကြောင့်, ဤဆောင်းပါးကိုငါတို့သည်လူကြိုက်အများဆုံးဘရောက်ဇာကို blocker အကြောင်းပြောဆိုလိမ့်မယ်။ ဆက်ဖတ်ရန်
Yandex Browser ကိုအတွက်ဘာသာပြန်စာပေ Tools များ
Windows7မှာ "Task Scheduler"